Detox: Nhema uye Chokwadi - Kubudirira kwehutano
musha » Blog » Detox: Nhema uye Chokwadi
Kushandisa mudziyo wewaini, kana sauna, kukurudzira kutuka kunobatsira kuderedza kuvepo kwehuipi hwemuviri wako. Imwe yemararamiro ako emuviri ekuzvidzivirira pachayo, inoshandisa kupfugama (kutuka). Zvisinei, mungozi chete (1% kana kuti pasi) yeaikisi mumuviri wako inodzingwa nenzira iyi. Saunas uye mudziyo wemvura inobatsira zvikuru uri mukubatsira kushandiswa kwemasabolism, sekuputika kunokosha kwegadzirisa magetsi.
Kushandisa mudziyo wewaini, kana sauna, unozarura ganda rako reganda rinobvumira kuti uwane detoxification yakawanda kuburikidza ne sweatshi yako. Haisi mishonga yose inogona kubviswa nenzira iyi, uye kana iri iyo inoguma pakuonekwa kunoonekwa paganda rako; kuputika, acne, kana kumhanya semuenzaniso. Mhepo yakanyanyisa iri muimba yekudzivirira inodzivirira jira rako kuti rirege kuputika, richibatsira mukuenzanisa mafuta eganda reganda, zvinoreva kuderera kwechiganda kana kuputika kweganda. Mushure mokushanda, kunyanya, kushandisa sauna, kana kuti mudzimba wemhepo, zvinobatsira zvikuru kuchenesa nekudzikisa ma pores.
Zvokudya zveDetox zvinosanganisira mari yakawanda yekutsinhanisa mari yako, pamwe nekudzivirira zvakanyanya. Zvokudya zvakagadzirirwa kubatsira kubvisa muviri wako zvinogona kunge zvakanyanyisa sezvaunoda kuti zvive. Zvakakosha kuziva, zvisinei, kuti kunyanya kuderedza kudya, zvakanyanya kuoma kuti iwe unamatire pairi.
Zvokudya zveDetox zvinogona nyore nyore kusanganisa kudya kwemwoyo kana zvikabatanidza zvigadzirwa zvakanaka, sekune imwe nzira ipi zvayo yekudya kwakakwana. Mbeu yemiriwo, michero yevirumusi, uye mbeu ndezemienzaniso yezvokudya izvo zvisingabatsiri uye zvinobudirira mukutengesa kudya. Kuwedzerwa kwehuteji wehutete pane zvekudya kwako zvakare kwakakosha pakuwedzera kubvisa muviri wako.
A detox kudya iwe pachako inzira inokurumidza uye inobudirira yaunogona kushandisa kuti uremerwe uremu. Ikozvino ndezvechokwadi kuti kana uchitanga kudyidikisa kudya, iwe ungangodaro unosangana nekukurumidza, kuonekwa kushaya kurasikirwa. Zvisinei, pakugumisa rudzi urwu rwezvokudya, chero kurashikirwa kunowanzowanikwa zvakare. Ichi ndechokuti kuyerwa kunowanzoita mvura kuyerwa. Zvakawedzerwa zvinodhaka zvemasikirwo zvisina basa zvinokonzera kuora kurasikirwa kuburikidza, kurasikirwa kwemasumbu pamwe chete.
Zvokudya izvo zvinosanganisira zvikamu zvekudzikisa kuwedzera kwekudya pamwe chete nekurovedza muviri nguva dzose ndiyo nzira inobatsira yekurema. Kuita kushandiswa kwevabatsiri vemagetsi sezvinoita detox kudya uye zvinwiwa (kufanana nehutetei chaiyo) inoita kuti muviri wako uwedzere kushanda zvakanaka. Kurema kunoreva kurasikirwa zvishoma nekukurumidza kudarika zvinowanzoitwa; pamwe nekuva nechokwadi kuti uremu huzhinji hunogona kuramba huripo, uye musimba wemazi hauna kurasikirwa.
Iwe uchanzwa wakaneta, uchinetseka kana kuti usanyarara mukati memotokisi yako. Hazvisi zvisingawanzwi kunzwa kumhanya-pasi mumazuva okutanga mushure mekutanga detox. Sezvo iyi ndiyo nguva yenguva iyo muviri wako uri kuchinja kune zvitsva zvesimba, apo uchiedza kutsvaga chepfu. Kana kunzwa uku kuri kuramba kuchikosha, zvinokosha kuti iwe umire uye uongororore zvinosanganiswa mu detox yako.
Mushure mekutanga kwechikamu chekutora kwako apo iwe unonzwa wakaneta, uye zvichida kurwara, unofanirwa kuzviwana uri nani kupfuura iwe usati watanga. Vanhu vanowanzoona sokuti vane simba rakawanda, uye vashoma netargic. Hazvisiwowo zvisiri izvo kuti uwane hutano huri nani semugumisiro.
Juice inochenesa ndiyo inobatsira nzira dzinovimbika dzokudzikisa muviri. Nokupedza kudya kunogadzirwa chete nemajisi (eshamba akatengwa kana kugadzirwa), iwe unopisa kuburikidza nemasimba emagetsi asiri kuzadza zvakare. Kushayikwa kwefibheti mumhando iyi yezvokudya kunogona kukonzera kuvharwa.
Majisi anofanira kushandiswa pamwe chete nemagetsi akawanda anowedzera simba; kuitira kudzivirira kupisa uye kubvongodza, apo kuwedzeredza zvingave zvingabatsira. Zvinokurudzirwa kuti majisi ashandiswe sechinzvimbo chekudya, kana kudya, panzvimbo yekuita zvose zvekudya kwako. Sezvavari pasi-calori, sarudzo dzakanaka dzakawanda mune zvimwe zvibereko.
Kunyanya kuwedzerwa kunwa kwako kwemvura kunobatsira kubvisa tsvina kubva mumuviri. Kunyangwe kunwa mvura uye kugara iwe hydrated zvakakosha zvikuru, zvose kana uripo uye apo iwe usati uri pane detox, sechinhu chero chipi zvacho, zvizhinji zvinogona kuva zvinokuvadza. Kunyanya kushandiswa kwemvura kunogona kukonzera manzwiro ekurwara, kusavhiringidzika, uye kuora musoro nguva dzose.
Mvura inobatsira mukudzivisa uye kubvisa zvinoshandiswa kubva mumagadziriro ako. Saka unogona kubatsira reabsorption yehupfu nezvinodhaka mumatumbo ako. Chinhu chikuru chinobatsira, zvakadaro, ndiko kuwedzera mvura yako yekudya kunowedzera simba rako remasabolism, kukurudzira mabasa anoshanda emumuviri (kusanganisira kubviswa kwemazuva ano).
Iyi chinyorwa chaipiwa naSam Socorro kubva Steam Shower Store, Sam ndiye munyori wenyanzvi muhutano nehutano hwakanaka uye ave achinyora uye achidzidza nyaya dzakadai seyi kune makore anopfuura 10.